नेपाल र्याफ्टिङका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाल र्याफ्टिङका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य
बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ,असार ६ गते। साहसिक पर्यटनप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । नेपालमा पदयात्रा, पर्वतारोहणपछि बढी सम्भावना बोकेको ¥याफ्टिङ अर्थात् जलयात्रा पर्यटन हो । व्यावसायिक ¥याफ्टिङमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा ¥याफ्टिङको अथाह सम्भावना भए पनि यसको प्रवद्र्धनमा यथेष्ट ध्यान नपुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रेमगीत–२ ट्रेलर (भिडियोसहित )
NEXT POST Next post: चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश प्रस्थान
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, असार ७, २०७४ १२:१६